Umcimbi weWinci eMessina: umhlaba omusha we-cryptocurrency ogwini lwe-Strait
Umcimbi we-Winci eMessina: umhlaba omusha we-cryptocurrency emabhange eStrait
Ezinye izindaba ezijikijela emihlathini ezivela kumphakathi owabelana kahle kakhulu wase-Italy
Umcimbi Winci imihlaba phakathi Messina: ngemuva kwempumelelo ebabazekayo eyemukele ukwethulwa kwayo ngomhlaka 19 Okthoba eMilan, the I-Italian cryptocurrency uyama edolobheni iStrait on Novemba 16 al I-Palacultura. Ngezinye izindaba eziningi ezimangazayo.
iSabatha 16 Novemba 2019, ngo-16:00, uzoba se I-Palacultura di Messina umcimbi abaningi abawulinde isikhathi eside: ukwethulwa kwephrojekthi ye-AWR Winci kanye nokuvuselelwa kwayo i-cryptocurrency.
UWinci ufika eMessina: izindaba eziningi zizogcinelwa uNovemba 16th
Ngubani olandele izindatshana ngokuzalwa okusha Isifunda se-Winci, bazovele bazi ukuthi ukuqala kobuchwepheshe obuhle I-TrovaWeb isekela iphrojekthi ngaphambilini I-Italian cryptocurrency kuqhubeke Ukwabelana Komphakathi ngubani owadalayo. Umcimbi wamahhala we-Winci ozophathwa kuwo Messina wadalelwa ukuletha zonke izindaba ezihlobene nale phrojekthi engaziwa ogwini lwe-Strait. Isinyathelo selivele lidonse ukunaka kwezinkulungwane zabantu Abathengisi e abathengi unesifiso sokujoyina i- umjikelezo della nokwabelana ngomphakathi ngobukhulu e-Italy. Manje ufika eMessina ezokwethula ezinye izindaba eziningi.
UWinci ufuna ukuphinda impinda yomcimbi owenzeka ngo-Okthoba 19 eMilan eMessina
Ukwethulwa kwenzeka e- Milan ukhombise ukuthandwa okwandayo kwe Isifunda se-Winci okubhaliselwe okungaphezulu kuka-40000 okuqoqwe kuyo yonke insimu yezwe. Futhi umcimbi Winci di Messina ngokuqinisekile kuzoba ubufakazi bokuthi inzalo u cryptocurrency Iqoqa kumabhizinisi amancane naphakathi nendawo, abantu kanye nemikhiqizo yaphesheya. The uhlelo lokuthembeka yamakhasimende ngaphakathi izikweletu usevele asebenza kwimikhiqizo edumile efana nePittarosso, Feltrinelli nabanye abaningi.
ITrovaWeb ihlela umcimbi weMessina njengeNxusa
ITrovaweb une, esebenza njenge Ambassia, ezibhalisiwe eziningi zezinkampani esebenzisana nazo kulokhu okusha umjikelezo wezohwebo. Umcimbi Winci okuzokwenzeka phakathi Messina Ngakho-ke, uNovemba 16, ngakho-ke, kuzoba indawo yokumelana kubo bonke abafuna ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukujoyina umphakathi ukwabelana umnotho. Kulabo abafuna ukwazi ukuqongelela izikweletu ngokusebenzisa I-WinciToken cryptocurrency. Futhi kubo bonke abafuna ukwazi ukubuka kuqala izindaba ezintsha ezithokozisayo.
Ama-Global Cards kanye ne-Cryptocurrency engathengwa yiwo wonke umuntu ngamahlelo ama-5 euros
Ambassador, abathengisi futhi abantu bonke bayamenywa ukuthi babelane ngolwazi olubalulekile lokuthi bangakha kanjani imodeli yezomnotho entsha ndawonye, ​​ngokusekelwe ku- amandla okuthenga wezakhamizi ngamunye. Ngesikhathi se-Umcimbi weWinci eMilan kwethulwa izindaba eziningi ngephrojekthi. Futhi abanye abaningi bazokwethulwa ngokusemthethweni ngesikhathi somcimbi weMessina. Okokuqala: uhlelo lokusebenza oluzokwenza ukuthi kube lula ukulayisha ngokuzenzakalelayo i izikweletu nokuthi ungabhekisisa kuphi inani le I-Cryptocurrency. Kuyinto I-DApp, i- 'Uhlelo lokusebenza oluhlukanisiwe kususelwa kubuchwepheshe IBlockchain. Kepha izindaba zangempela ezizokwethulwa Messina ihlotshaniswa nokukwazi ukuthenga i cryptocurrency ngisho nokusikeka okuncane. Eqinisweni, kusukela ngoNovemba 16, 2019, noma ngubani uzokwazi ukuthenga i-cryptocurrency, kumahlelo aqala kusuka kuma-5 Euro. Umcimbi Winci di Messina ngamafuphi, lithembisa ukumangala okukhulu ngalo msebenzi oyilangazelelo osuhlose ukwanda emhlabeni jikelele.
le Ambassador asebhalisiwe vele kufanele anikeze uhlu lwabo kuNobhala Wezincwadi I-TrovaWeb ohlela umcimbi
Tags: umjikelezo we-winci I-Italian cryptocurrency i-cryptocurrency winci umcimbi we-winci messina
19 Okhthoba 2019: i-Winci Cryptocurrency isifikile ekugcineni